Dallad ay ku bahoobeen wershedaha Puntland oo Boosaaso looga dhawaaqay [Codad+Sawiro] • Horseed Media
You are here: Home / Business / Local businesses / Dallad ay ku bahoobeen wershedaha Puntland oo Boosaaso looga dhawaaqay [Codad+Sawiro]
February 26, 2012 - By: Moha Salat
Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaa maanta looga dhawaaqay urur ay ku bahoobeen wershedaha ka jira Puntland.
Munaasabadii ururkan lagu daah furayey oo ka dhacday xarunta rugta ganacsiga iyo wershedaha Puntland ee Boosaaso ayaa waxaa kasoo qayb galay mas’uuliyiin dowladda ka tirsan, maamulka rugta, iyo ganacsato badan.
Madaxdii munaasabadaas kasoo qayb galayna waxaa kamid ahaa wasiiru dowlaha ganacsiga ee Puntland Maxamuud Faarax Beeldaaje, gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo wershedaha Puntland Maxamuud Xayir Ibraahim, ku-xigeenadiisa Siciid Xuseen Ciid, Maxamed Caydiid Jaamac, iyo xoghayaha guud ee rugta Axmed Ciise Maxamuud.
Ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay xoghayaha guud ee rugta ganacsiga Axmed Ciise Maxamuud wuxuuna ka warbixiyey qaabkii lagu soo doortay gudoonka sare ee ay dalladaasi yeelanayso iyo inta xubnoond ee ay ka kooban yihiin.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo wershedaha ee Puntland Maxamuud Xayir Ibraahim oo intaas kadib hadalka qaatay ayaa sheegay inay wax lagu farxo tahay in wershadaha Puntland ay yeeshaan dallad ay ku bahoobeen taasina ay horseedi doonto in Puntland ay hurmar dhanka dhaqaalaha ah oo weyn ku talaabsato.
Cabdifataax Jaamac Nuur oo isaga loo doortay gudoomiyaha dallada ganacsatada wershedaha ee Puntland ayaa isna sheegay in dalladan cusub ee al sameeyey ay noqonayso mid wax badan tarta maadaama laga soo bilaabo xiligii ay dowladdii dhexe burburtay uusan jiran nidaam mideysan oo isku xira wershedaha dalka ka jira.
Gudoomiye ku xigeenka 1-aad ee rugta ganacsiga Puntland Siciid Xuseen Ciid oo kamid ahaa mas’uuliyiintii munaasabadaas ka hadlay wuxuu ka warbixiyey faa’iidada ay wershaduhu leeyihiin maadaama ay kaalin weyn ka qaataan wax soo saarka dalka arintaas oo uu mudane Ciid tilmaamay inay tahay midda ay dunidu ku kala hor martay.
Cabdiladiif Yuusf Barre oo kamid ah asaasayaashii rugta ganacsiga kuna jira ganacsatada ugu waaweyn Puntland ayaa isna ku booriyey gudoonka cusub ee ururka wershedaha inay ku dadaalaan sidii ay xilka la saaray uga soo dhalaali lahaayeen, isagoo intaas raaciyey in ganacsatada ay tahay inay qayb weyn ka qaataan horumarka guud ee bulshada.
Wasiiru dowlaha ganacsiga ee Puntland Maxamuud Faarax Beeldaaje oo gaba gabadii hadalka qaatay ayaa ku dheeraaday sida ay dowladdu dadaalka dheeriga ah ugu bixiso harumarinta dhaqaalaha, isagoo intaas raaciyey in inta badan ganacsatadu ay cashuurta ka cawdaan, cashuurtuna ay tahay waxa keliya ee horumarka dalku ku imaan karo.
Waa markii ugu horeysey ee Puntland laga sameeyo dallada ay wershaduhu ku mideysan yihiin, waxaana gudoonka sare ee maamulka ururkaas loo doortay ay kala yihiin sidan:
Gudoomiye: Cabdifataax Jaamac Nuur
Gudoomiye ku-xigeen 1: Maxamuud Maxamed Jaamac (Carab)
Gudoomiye ku-xigeen 2: Khaalid Xasan Cali